'जो डर गया वो मर गया !' (समाजवाद–विमर्श)
कन्सुलर सुलभ अग्रवाललाई ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमती
अन्तर्वार्ता/विचार आइतबार, साउन १९, २०७६
समाजवाद भयंकर अलमलमा परेको छ । प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) को बेग्लै समाजवाद, ओली (केपी ओली) को बेग्लै । दुवैबाट उछिट्टिएका बाबुराम भट्टराईको झन् बेग्लै समाजवाद । बाबुराम झन् यिनीहरू भन्दा विद्वान् मानिन्छन्, पीएचडी गरिसकेका । हाम्रा शेरबहादुर देउवाले त झन् बेलायतमै पढेर आएको। उहाँभन्दा पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसीका बारेमा जान्ने को ?
पार्लियामेन्टको जननी लन्डन, सारा समाजवादी निस्किएका लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सबाट । हो, देउवा त्यहींबाट पढेर आएका । कोहीभन्दा कोही कम छैनन्, नेकपा होस् वा कांग्रेस । दुवै पार्टीमा पीएचडी होल्डर बराबर छन् । सबै समाजवाद भनिरहेका छन् । के हो यो ? श्रोता, पाठकलाई अलमल लाग्नु स्वाभाविक हो । यो बुझ्न जरुरी छ ।
तपाईंको पार्टीनेतासँग डराउने, बजारमा पुलिससँग डराउने, घरमा गलत कुरा गरिराखेका आमाबाबुसँग डराउने समाजवादी हुन सक्दैन । आज भूमण्डलीकरणले गर्दा नेपालमा मुस्किलले एक खर्ब निर्यात गर्दा १३\_१४ खर्ब आयात गरिरहेका छौं । प्रतिव्यक्ति माथि ऋण बढिरहेको छ ।
हामी केटाकेटी हुँदा ‘बम्बईका घोल देखो’ भनेर आउने ‘बाइस्कोप’ देखेर उनीहरू हुर्केका थिए । यो बुझ्न जरुरी छ । बीपीका नाममा होस् वा पुष्पलालजीको नाममा बनाइएका शास्त्र र ती शास्त्र भट्याउने नेताहरूसँग समाजवादी डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन।
चीन लाजै नमानी पूँजीवाद निर्माणको बाटोमा गयो । अब जीन पीङले पीएचडी गरेको छ रे, इन्जिनियर रे । पेङ (देङ सिआयो पिङ)ले घोषणा गरेको १० वर्षमा अनिवार्य पद छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा बदलियो ।
बुधबार, चैत २६, २०७६ कन्सुलर सुलभ अग्रवाललाई ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमती